Microsoft Yekushandisa Inspector: chishandiso chekuongorora sosi kodhi | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yakaburitsa paGitHub, chikuva chavo, a kodhi yekuongorora chishandiso yakagadzirirwa kugadzira iwe kuti unzwisise zvinoita chaizvo kodhi yekodhi. Izvi zvinogona kuve nezvinonakidza zvekushandisa zvekuchengetedza, uchiziva kana kodhi yekodhi inogona kunge iine mamwe mabasa asingadiwe ayo angave akaoma kuziva pasina kuongorora zvine hungwaru kodhi yekodhi yechirongwa kana sevhisi yauchazoshandisa.
Con Microsoft Yekushandisa InspectorSezvo chishandiso chakanyorwa paNET Core chakadaidzwa, iwe unozogona kuongorora mamirioni emitsetse yekodhi mune imwe nyaya isina nguva. Chirevo chekupedzisira chinokuratidza ruzivo rwese rwaunoda kuti uzive kana rungangosanganisira njodzi dzekuchengetedza kana kana riine mabasa asingadiwe. Uye zvakare, inoenderana nenhamba yakakura yemitauro yemitauro, saka inogona kuve nerutsigiro rukuru.
Imwe yemabhenefiti eMicrosoft Application Inspector inogona kunge iine hukama neiyo kuchengetedzwa kwekutyisidzirwa kwekuonekwa mune kodhi kodhi yekuvhura sosi kunyorera uye masevhisi. Asi kubva kukambani ivo vakaona kuti mashandiro avo anodarika ipapo. Semuenzaniso, tarisa shanduko dzakakosha pakati pekodhi, zvinhu zvitsva zvakaitwa, nezvimwe.
Microsoft yakatsanangurawo chikonzero chekuvhurwa kwechishandiso ichi, uye ndizvo batsira vatengi kutarisana nenjodzi dzehunhu dzekuvimba neyakavhurika sosi software, kuona kutyisidzira, maficha akanaka, uye zvakaoma-kuziva metadata nemaoko. Nekudaro, ivo vanokanganwa kuti pane chimwe chinhu chine njodzi yekuzvarwa pane kuvimba neyakavhurika sosi software, uye ndiko kuvimba nekambani kana yakavharwa sosi software uye masevhisi sezvakawanda zvigadzirwa zveMicrosoft.
Iva zvazvingaite, Microsoft Application Inspector inogona kunakidza kumakambani mazhinji anoshandisa open source, achivabvumidza kuti vangoongorore kodhi yezvinhu zvese zvavanoda kushandisa kuti vaone kuti yakavimbika, pamwe nekuziva chaizvo zvazvinoita. Semuenzaniso, vamwe makambani anopa akavhurwa sosi mapurojekiti iyo yavanoshandisa ipapo kumasevhisi avo, asi kambani ingangodaro yakangopa mitsara mishoma kana kubata-kumusoro mune zvimwe zvikamu. Asi ivo vachiri havazive zvinoitwa nekodhi yese. Kune izvi ini ndaigona kubatsira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft Yekushandisa Inspector: chishandiso chekutarisa sosi kodhi yezvirongwa
Microsoft […] "zvine njodzi yekuvimba nesoftware yakavhurika." Uku kupusa, chii chiri kuitika nevanhu ava, chero chinhu chinoita kuti kodhi yakavharwa iratidzike zvakanaka uye zano ravo rekuwana mari kubva chero kwainoitika